तिथि मेरो पत्रु »7सेक्स बारे मिथ्या
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 26 2020 |2मिनेट पढ्न
यो मित्रहरुलाई आउँछ चाहे, आमाबाबुले, अश्लील, या हलीवुड, हामी सबै यौनबारे हाम्रो टाउको मा गलत जानकारी छ. सौभाग्य, हामी मदत सबैभन्दा हास्यास्पद मिथकहरुको केही अर्थ यहाँ छन्.
मिथक #1: तपाईं एक मानिसको लिङ्ग आफ्नो जूता आकार हो कसरी ठूलो एक बताउन सक्नुहुन्छ, यो भनाइ जान्छ लागि “उहाँले ठूलो खुट्टा छ भने…”. यो गलत छ. लिंग आकार र जूता आकार बीच कुनै सम्बन्ध बिल्कुल छ. यो पनि हात आकार र कान आकार लागि जान्छ.
मिथक #2: लिंग बडा, स्त्रीको प्राप्त हुनेछ अधिक सन्तुष्टि. झूटो, आकार वास्तवमा खुशी को राशि संग गर्न केही छ, यो ज्यादातर सिर्फ एक मानिसको अहम् संग के छ. जी-स्पट योनी भित्र दुई इन्च स्थित र यो thrusting जबकि यो उत्तेजित कि लिंग को टाउको छ. वास्तवमा, एक ठूलो लिङ्ग प्रायजसो पूरै जी-स्पट सम्झना. सिद्धान्त मा त्यसैले, आकार प्राथमिकता छैन सन्तुष्टि तल आउछ.
मिथक #3: त्यो पहिले नै गर्भवती छ, जबकि एक महिला एक बच्चा गर्भवती लागि यो असम्भव छ. झूटो, भनिन्छ superfetation, यो धेरै दुर्लभ छ तापनि एक महिला वास्तवमा गर्भवती जबकि गर्भवती सक्छ.
मिथक #4: विवाह आफ्नो सेक्स जीवन बिगार्छ. यो गलत छ. सेक्स, वास्तवमा, विवाह पछि सुधार. हाल अध्ययन विवाहित दम्पतीले उच्च सन्तुष्टि छ भनेर संकेत गर्छ, अधिक विविध स्थिति प्रयास, र अधिक पल्ट सेक्स छ.
मिथक #5: महिला अश्लील हेर्न छैन. फेरि विचार. धेरै जबकि यसलाई स्वीकार सक्छ छैन, महिला अश्लील प्रशस्त हेर्न. हाल को अनुसन्धान समयमा, 85% महिलाको अश्लील देख्यो भएको स्वीकारे. त्यसैले यो महिला पुरुष जस्तै धेरै हेर्न देखिन्छ.
मिथक #6: तपाईं एक पूल या हट टब मा सेक्स छ भने तपाईं गर्भवती प्राप्त छैन. अध्ययन भन्दा बढी लागि एक हट टब मा भएको साबित गरेको छ कि 30 मिनेट शुक्राणुहरुलाई कम गर्न सक्छन्; तथापि, शुक्राणु बन्द मार्नेछ कुनै पनि तापमान वा रासायनिक प्रकृति को पानी मा केही छ. एक शुक्राणु योनी भित्र प्रवेश पल्ट, आफ्नो लक्ष्य निषेचन एक अन्डा पाउन छ, कुनै कुराले त्यसलाई रोक्न हुनेछ.
मिथक #7: पुरानो मान्छे सेक्स छैन. रोग भए तापनि, एक जोडीलाई को मृत्यु, अन्य कारण बीचमा दबाइ को दुष्प्रभाव एक बाधा बन्न सक्छ, उमेर सेक्स रोक्दैनन्. कामुकता उमेर निर्धारित छ कि मानव अवस्था सधैंभरि-लामो पक्ष हो, शारीरिक उपस्थिति, स्वास्थ्य, वा कार्यात्मक क्षमता. वास्तवमा, मान्छे को बहुमत बुढेसकालमा मा राम्रो यौन सक्रिय रहन. उन को शीर्ष मा, वृद्धहरूको नियमित सेक्स वास्तवमा मानसिक र शारीरिक मदत गर्न सक्छ.